आकाशवाणी (Aakashwani): October 2012
जीवन र जगतसँग जोडीएका कार्टून/तस्वीर/लेख/टिप्पणी तथा विविधा
मेरो दशैं :
पाराखोपीका किराना पसले पाजुले दसैंमा जहिले पनि दुई छोराहरुलाई पन्चायतकालिन पुलिस ईन्सपेक्टरको जस्तो रेडिमेड लुगा किन्दिन्थे । त्यो लुगामा एउटा सिट्टी, नक्कली बन्दुक र नक्कली मेडलहरु हुन्थ्यो । अनी क्याप पनि सेटमै आएको हुनेरहेछ ! खै किन हो पाजुले जुनसुकै दसैंमा पनि केटाहरुलाई त्यही लुगा किन्दिन्थे ।
'त्यस्तै लुगा लगाएर बन्दुक पड्काउँदै हिंड्न पाये!'- मलाई रहर लाग्थ्यो । किन-किन मलाई त्यो लुगा अत्यन्तै आकर्षक लाग्थ्यो ।
आमालाई त्यस्तै लुगा किन्दिन जिद्दी गरें । तर बुवाले 'त्यस्तो लुगा पनि लाउँछन् ? लाज पो हुन्छ त !' भन्नुभयो र कहिले किन्दिनु भएन ।
'बरु बाबु तलाईं म 'ली'को पेन्ट र 'वारीयर' जुता किन्दिन्छु'- आमाले भन्नु भयो ।
त्यो बेलामा लीको पेन्ट सितिमिती केटाकेटीले लाउन पाउँदैनथे त्यसमाथी वारीयर जुत्ता ! हेर्दा अहिलेको गोल्डस्टार जस्तै मोडलको हुन्थ्यो वारीयर जुत्ता । म बल्ल-बल्ल राजी भयें । अनी त्यो पालीको दसैंमा म लीको पेन्ट, वारीयर जुत्ता र पहेंलो रङको गोलगलाको टि-शर्टमा ठाँटिएर हिंड्न पाँये । तर मलाई पाजुका छोराहरुले लाये जस्तो ईन्सपेक्टरको लुगाले आकर्षित गरिराख्यो !
अहिले सम्झिँदा तीं रहरहरु, त्यो पाराखोपी टोल, त्यो बालापन अनी त्यो दशै खुब रमाइलो लाग्छ !▪
Labels: Balyakaal, Dasain, Happy Dashain, Nepali Chaad
हाम्रो घर मा दसैं होस् वा अरु कुनै चाड-पर्ब मनाइन्छ तर काट्मार गर्ने चलन छैन । मासु खाहिन्छ तर बगरेको बाट किनेर । झन् खसी त काट्दै काटिदैन हाम्रोमा ।
भएछ के भने; त्यो बेलामा मेरो बुवा सानै उमेरको हुनुहुन्थ्यो रे । घरमा एउटा लाम्काने बाख्राको पाठो थियो रे । त्यो पाठोको नाम मेरो बुवाले 'अशोक' राखिदिनु भएछ । अशोक भनेर जस्ले बोलाये पनि खुरुक्क आइपुग्थ्यो रे । सानो-छुनुमुनु गर्दै, बुरुक्क-बुरुक्क उफ्रिदै घरका सबै केटाकेटीसँग खेल्थ्यो रे अशोक । परिवारको एउटा सदस्य थियो रे अशोक । जब अशोक हट्टा-कट्टा र बलियो भयो । हजुरबुवाले यसपाली को दशैमा यस्लाई काट्ने भन्न थाल्नु भयो रे । हजुरबुवाको बिरोध गर्ने आँट कसैसँग थिएन रे । नभन्दै दसैं पनि आयो । अब मार हान्नलाई सबै कुरा ठीक-ठाक पारीएछ । हतियार भेला पारीयो, पानी तताइयो अनी हजुरबुवाले 'खसी लिएर आइज' भनेर जेठो छोरो(मेरो बुवा)लाई अराउनु भएछ । अनी बुवाले 'अशोक' भनेर बोलाउने बित्तिकै खुरुक्क मार हान्ने ठाउँमा आइपुगेछ । हजुरबुवाले पूजा-पाठ गरेर अशोकलाई काट्नु भएछ । तर, घरका सबै केटाकेटी रोये रे । मासु त कसैले नि छोएन रे । घरका कसैले नखाएपछी मासु फ्याकियो रे । त्यसबेलादेखी हजुरबुवाले घरमा काट्मार बन्द गर्नुभएछ । अहिलेसम्मा हाम्रोमा काट्मार गर्ने चलन छैन ।▪
Did you understand?
साप्ताहिक(कान्तिपुर पब्लिकेशन,काठमान्डु,नेपाल)मा प्रकाशित
दशै कस्को ?
- योगेश खपाङगी
सधैंको बर्ष झै यसपाली पनि संसारभरिका नेपालीलाई दशैले झ्याप छोपेको छ । सधैं झै यसपाली पनि शुभकामना दिने-लिने तथा खुशीयाली बाँड्ने क्रम शुरु भएको छ
तर केही भिन्न बिचार राख्नेहरु सधैं झैं 'दसैं बहिस्कार' आन्दोलनमा पनि लागिसके ।
आखिर किन हुन्छ त जहिले पनि दशैको बिरोध ! स्वाभाबिक छ । दशैलाई 'हिन्दूहरुको मात्र चाड' भन्ने गरिएको छ; त्यसैले हुन्छ दशैको बिरोध । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दसै कुनै अमुक जाति र हिन्दूहरुको मात्र पेवा होइन । यो त सबै धर्म मान्ने नेपाली जातिको साझा संस्क्रिती हो । पहिला दसैं भनेको चैतमा थियो । चैते दसैं भनेको थाहा छ होला नि ! ईतिहास साक्षी छ; चैतमा मौसम अनुकुल नभएको र कामको चटारो हुने बेला भएको हुनाले यस्लाई सफा र ठीक्कको मौसम न जाडो-न गर्मी अनी कामको चटारो पनि नहुने बेला असोजमा सारीएको हो । चैते दसैंलाई सानो दशै र असोजमा आउने दसैंलाई बडा दसैं भन्न थालिएको हो ।
पहिला दशै भनेको सारा नेपालीको साझा चाड थियो । पछी मात्र यस्लाई हिन्दूको चाडको रुपमा प्रचार गरिएको हो । दुर्गा माता र भगवान रामसँग हाम्रो साझा चाड दशैको बारहातको साईनो पनि थिएन र छैन पनि । समयक्रममा पछी यस्लाई ब्राह्मणीकरण गरिएको हो । तागाधारीले 'हाम्रो पेवा चाड' भनेपछी गैरतागाधारीहरुले 'तिमीहरुको चाड हामीले किन मान्ने' भनेर छाड्दै लगेको मात्र हो । बास्तवमा रामले रावणलाई मारेको खुशीयालीमा अथवा दुर्गामाताले महिशासुरलाई मारेको उपलक्ष्यमा हामीले दशै मान्न थालेको पनि होइन । अनी निधारमा लगाउने गरेको रातो चामलको अक्षता पनि कुनै महिशासुरको रगत मुछेर लगाउने गरिएको पनि होइन । बुढापाकालाई सोधे हुन्छ, दही र चामलमा रातो रङ राख्ने चलन त भर्खरै भित्रिएको मात्र हो । यो त हाम्रो नितान्त मौलिक र नेपाली मात्रको चाड हो । यदी यो चाड हिन्दूहरुको मात्र थियो भने खै त भारतीय हिन्दूहरुले मानेका ? भारतीय हिन्दूहरुको दशहरा भनेको दशमीदेखी नै सकिन्छ । जबकी हाम्रो खास रमाइलो दशै चैं दशमीदेखी शुरु हुन्छ । नातामा आफुभन्दा ठुलाबाट चामल र दहिमा मुछिएको टिका लगाउने, जमरा लगाउने आशिर्बाद लिने, सानालाई आशिर्बाद दिने, भेला भएर खानपान गर्ने, नयाँ कपडा लगाउने, दक्षिणा दिने, लिङगे पिङ खेल्ने लगायतका कामहरु सम्पूर्ण हिन्दूहरुले गर्दैनन् । त्यसैले पनि हामीले मानी आएको दशै हिन्दूहरुको पेवा भनिठान्नु ठीक हुन सक्दैन ।
हाम्रो साझा चाड दसैंको धार्मिक भन्दा पनि सांस्कृतिक महत्व बढी छ । काम र रोजगारीका लागि टाढा-टाढा पुगेका र लामो समयसम्म भेट नभएको परिवारलाई पुनर्मिलन गराउँछ दशैले । केटा-केटीहरुलाई पारिवारिक महत्व बुझाउँछ दशैले । देश-बिदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई एकसुत्रमा बाँध्ने काम गर्छ दशैले ।
दशैलाई 'हिन्दूहरुको महान चाड बिजया दशमी' नभन्नुहोस्, सट्टामा बडा दशै वा दसैं मात्र भन्नुहोस् ।
सबैलाई बडा दशैको शुभकामना !
Labels: Dasain, Dashain, Nepali Chaad, Nepali Samaj, Note, Samaj
जातीय राजनीति र अबको बाटो !
१० हजार बर्ष अघी जस्लाई अहिले हामी हिन्दू धर्म भन्छौं त्यो धर्म थिएन; एउटा संस्कार थियो । ठुलो-सानो जात ब्यवस्था थिएन । जब भ्रिगु ॠषिले आदीराजा मनुले लेखेको भनेर 'मनुस्म्रिती' ग्रन्थको पुनर्लेखन गरे, त्यसपछी मनिसलाई ब्राह्मड, क्षत्रीय, बैश्य, शुद्र गरी चार जातमा बिभक्त गरे । त्यस्पछी जस्लाई उँचो जातको पगरी भिराइयो उनिहरुले जातिप्रथालाई बढाउन अझ मलजल गरे । एकातिर हेपिए भने आफुभन्दा सानो भनिएकालाई अझ काठोर तरिकाले हेप्न-पेल्न शुरु गरियो । स्त्रीलाई अझ दबाइयो । दोस्रो दर्जाको ठानियो अनी धर्म कर्ममा लगाइयो र मुलराजनीतीबाट हटाइयो । निषेधको राजनीती सुरुवात भयो । त्यहींबाट हिन्दू धर्मको नाशहुने क्रम पनि शुरु भयो ।
मनुले रोपेको बिषब्रिक्ष बढदै र झाँगिदै गयो । साथसाथै हिन्दूबाट अहिन्दू हुने क्रम पनि शुरु भयो । हिन्दू धर्ममा बिभिन्न गुट र उपगुट बन्न थाले । जस्लाई सानो जात, म्लेच्छ भनियो; उनिहरुले धर्म परिवर्तनमा जोड दिन थाले । सामाजिक एकता भङग हुन थाल्यो । वास्तवमा मनु र भ्रिगु हिन्दू संस्कारका अपराधीहरु हुन् । जस्ले सम्रिद्ध र अनुशासित हिन्दू संस्कारलाई हिन्दू धर्म बनाए अनी धर्मलाई राजा र ब्राह्मडबादको चंगुलमा फसाये । जातिपाती, छुवाछूत प्रथा भित्र्याउने मनु र भ्रिगुलाई ॠषि भन्दै अहिले हामीले भगवानको दर्जा दिएका छौं । तर जातीप्रथा (खासगरी ब्राह्मणबाद)को बिरोध गर्नेलाई नास्तिक भन्दै तिरस्कार किन गरिएको हो र कस्कालागी त्यसो गरिन्छ भन्ने बुझ्न प्रयास गरेमा त्यती गाह्रो छैन !
एमाले, काँग्रेस लगायतका पार्टीहरुबाट छुटेकाहरुको पनि राजनीतिक लक्ष्य जातिपाती र ब्राह्मणबाद बिरोधी हो भने त ठिकै हो । नत्र पद, पैसा र राजनीतिक भागबन्डाको लागि पार्टी खोल्ने तर्खर गर्या हो भने त यिनिहरुको पतन पनि निश्चित छ । यदी अशोक राईहरुको बुद्दी छ भने अझै पनि आ-आफ्नो मुल पार्टिमा बसुन् । अनी अब खोल्ने भनिएको पार्टीलाई एउटा शशक्त प्रेसरग्रुपमा रुपान्तरण गरुन् । त्यसो भएमा मङोल मात्र होइन, गैह्र मङगोल, दलित, गैह्र हिन्दू को पनि त्यस्तो प्रेसरग्रुपमा आकर्षण बढ्ने छ । आखिर लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको मेरुदन्ड भनेको चुनाव न हो । चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरुसंग प्रसस्त बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ । अहिलेभन्दा सजिलो बाटोबाट आफ्न एजेन्डाहरु लागू गराउन सकिन्छ । प्रेसरग्रुपको फाईदा के पनि छ भने; आफ्न समुहको मान्छे जुनसुकै पार्टिमा त हुने नै भये । त्यसमाथी राजनीतिक पार्टिहरु ठुलो भोटबैंक हो भनेर सधैं भरी डराइराख्ने र जतिसक्दो धेरै प्रलोभनहरु दिनेछन् ।
झट्ट हेर्दा जातिबादी राजनीती गरेको वा पार्टी खोलेको गैरब्राह्मणहरुको नजरमा राम्रो देखिये पनि अन्तत: यस्ले सामाजिक संरचना र गठबन्धनलाई चकनाचुर पार्ने छ । आपसी जातीय भेदभाव अझ्झ बढेर जाने छ । जातिययुद्ध शुरु हुनेछ । देशको बिकास, मानिसको चेतनास्तर अझै पछाडि धकेलिने छ । जातको नाम नलीई कसैले असल बिचार राखेर राजनीती गर्न सक्ने छैन । बिचारको होइन, जातको राजनिती हुनेछ अनी भारत, बर्मा र सोमालियामा जस्तै एक जातिको मान्छेले अर्को जातिको मान्छेको रगत खानेछन् । त्यसैले आजको आवश्यकता जातिबादी पार्टी होइन, जातीबिरोधी प्रेसरग्रुपको हो ।▪
Health Update @Express Multimedia
स्वास्थ्य सम्बन्धी बिशेषज्ञसँगको बिशेष कुराकानी कार्यक्रम 'हेल्थ अपडेट' मा । For YouTube link please click over the Image.
Connet with me in Facebook
Where the place for mediator?
Cover Design: Hring Persons with Disabilities
के इशा मसिह डिसेम्बर २५ मा जन्मिएका होइनन् र ? (बाइबल बारे १२ रोचक तथ्य सहित)
योगेश कुमार खपाङ्गी चिसो-चिसो बतास र थर-थर कमाउने जाडोसँगै हरेक सालको डिसेम्बर २५ तारिखमा इसाइको सबैभन्दा ठुलो चाड 'क्रिसमस' ...
Published in 'Chunamuna'apopular Nepalese children's magazine.
Dubai Tour: Enjoy this video with music
Did you understand?[All of these titled cartoons had published in Nepal’s popular weekly paper ‘Kantipur Publication’s Saptahik’.] ...
Published in 'Saptahik' weekly
© Yogesh Kumar Khapangi. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.